I-Maxim Apartment - indlu entsha yeentaba
Mavrovo, Municipality of Mavrovo and Rostuša, UMntla Makedoni
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDarko
Indlu entsha kunye nepholileyo eMavrovo enezinto zokuhombisa zale mihla, zenzelwe wena nje. Indawo apho indalo kunye ne-adventure zihlala zikhona. Ukuba uthanda iindawo ezintle - kunokuba ukwindawo elungileyo nakwintliziyo yePaki yeSizwe.
Ekunene kufuphi neendawo zokutyibilika ze-Ski Centre Zare Lazarevski, kwindawo yokuhlala yaseMavrovo kwaye kufutshane neLake Mavrovo.
Ifulethi elitsha, elihle kunye nelanamhlanje, elinesitayile kwaye liyilelwe ukukunika intuthuzelo enkulu. Idweliswe ngokufutshane:
- Iilinen zebhedi ezitsha, iitawuli, iisepha, isixhobo sokomisa iinwele
- Yonke into oyifunayo ekhitshini: ukusuka kwityuwa ukuya kwioli yeoli
-I-SmartTV eneNetflix kunye nokubhaliswa kwe-HBO Go.
Kwabo bathanda ukutyibiliza ngendlela eyahlukileyo, iziko lokutyibiliza linika ithuba elikhethekileyo lokuzama ukutyibiliza ekhephini, ukutyibiliza kwi-alpine, kunye nokhenketho olunomdla lokutyibiliza.
I-Mavrovo yindawo ekunika i-adventure engalibalekiyo ehlotyeni. Iindawo ezintle zehlathi, iLake Mavrovo, kunye neendlela ezininzi zeentaba ezibonelela ngamathuba okuhamba intaba, ukuhamba ngebhayisikile kunye nokunyuka intaba. Ichibi leMavrovo elinendawo engqongileyo engqongileyo kunye nokuzola kwentaba kukunika amava ongasoze ulibaleke kwiKayak okanye kwibhodi ye-SUP.
Umbuki zindwendwe ngu- Darko
Ndihlala ndifumaneka kwimibuzo ngefowuni, i-imeyile, iViber kunye ne-WhatsApp.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mavrovo